HS: Xukuumad tayo leh (oo tira badan)
Posted by admin on January 08 2011 14:23:54
Sabti 8, Janaayo 2011 (HSOL)Sida ka muuqata liiska Golaha Wasiirada Hiiraan State waxaa ku cad in xubnaha la magacaabay yihiin shaqsiyaad karti leh.
Sida ka muuqata liiska Golaha Wasiirada Hiiraan State waxaa ku cad in xubnaha la magacaabay yihiin shaqsiyaad karti leh. Waa hubanti in tirada wasaaradaha ka yaraan kartay intaan, laakiin aan isxusuusino in HS yahay dowlad-goboleed dhulkeedii la haaysto. HS waa dowlad-goboleed u baahan waqtiga xaadirka ah taageero sal ballaaran. Waxaana isxusuusin mudan in xukuumaddii u dambeeysay ee Somaliland ee uu hoggaaminayey Riyaale ka koobneyd 26 wasaaradood. Waxaana laga joogaa dhowr bilood oo keliya xilligii uu xilka la wareegay Siilaanyo. Waqtigii doorashada Siilaanyo waxaa lagula taliyey in uu yareeyo wasaaradaha, kana dhigo 15 wasaaradood oo keliya, laakiin markii uu qabtay xilka ayuu arkay xaqiiqada dhabta ah, oo ah in beel walba dooneyso in ay iska dhex aragto xukuumaddiisa. Wuxuu ka kooban yahay golihiisa wasiirada 20 wasaaradood, mana u suurtogelin in uu ku koobo 15kii wasaaradood ee lagula taliyey. Haddaba qofka ka jooga bannaanka go'aanka dhismaha dowladda waxaa laga yaabaa in ay waxyaabo badan la fudud yihiin.
Dadbaa tirada wasaaradaha la yaaban, dadna waxa ay doonayaan in dhammaan walaalaha xilalka loo magacaabay aqbalaan xilka loo doortay. Waxa u muuqda dadkaas tayada liiska golaha wasiirada. Marka hore, walaalahaas waa in aan ugu hambalyeeyno xilkooda, kadibna aan ka codsano iney aqbalaan mas'uuliyadda loo magacaabay. Insha Allah, mustaqbalka dhow haddii gobolka gacanta soo galo, waayo-aragnimana aan u yeelano dowlad-goboleed iyo qaabka uu u shaqeeyo, waxaa suurtogal ah in la koobo wasaaradaha.
Hiiraan State wuxuu ku hirgali karaa haddii aan muruqeena ku taageerno. Sidaas darteed waa lagama maarmaan in loo helo HS taageero sal ballaaran iyo xoog aad u badan oo hirgeliya, dhidibadana u istaajiya.
Gabogabo: Madaxda HS, mar walba ha ogaadeen in dhaliil loo soo jeedin doono. Dhaliilahaas waxey isugu jiri doonaan kuwo wax-ku-ool ah iyo kuwo aan waxtar laheyn. Shalay dhaliishu waxey aheyd, maamulka HS wuxuu ka kooban yahay hal qof, maanta dhaliishu waa, aad ayey xukuumaddu u tiro badan tahan. Nasiib wanaag, dhaliishu ma aha dhanka tayada xubnaha ku jira xukuumadda HS. Dib-u-heshiisiin waxaa horseedi karta xukuumad sal ballaaran. Xukuumad dhaafsiisan madaxweyne keliya ayaa la geli karta dib-u-heshiisiin dhinacyada ka soo horjeeda, sidoo kalena u ololeyn karta taageero dhaqaale oo laga helo bulsho weynta. Xukuumad shaqeyneysa ayey u fududahay iney waanwaan la gasho kooxaha ka soo horjeeda.
Qaabka loo dhisay gobolada iyo magac-bixintaba waxaa hubaal ah in ay jiraan waxyaabo u baahan turxaan bixin. sida magaca gobolka Dhagax jibis oo loo bedeli karo Gobolka Baar. waxaasi oo dhan waxaa waxna ka bedeli karo waxna ku dari karo golaha xildhibaanada dowlad goboleedka HS marka la soo dhiso.
Ma jirto cid runta oo dhan iska leh (Nessuno possiede la veritą assoluta).
Insha warka Hiranstate